Ukuzithuthukisa - Mag Incredible Mag
AmaTattoos: Ukulinganisa Izinzuzo Nezinzuzo
by URosina D.
Ama-tattoos asevame kakhulu kunanini ngaphambili. Ukuba ne-tattoo nakho, ngokubonga, sekuqale ukudlula inkolelo-mbono yokuba wuphawu olukhombisayo lokuba yimbewu embi, ilungu leqembu lezigebengu, noma ezinye izinhlobo ezihlubukayo. Kulezi zinsuku, abesilisa nabesifazane hhayi…
Ezokuphepha Akufanele Zenziwe Ngemuva Kokusebenzisa Ama-Devops
Izinkampani emhlabeni wonke zamukela i-DevOps automation. Isici esiyinhloko sokushayela sempumelelo ye-DevOps ukuthi i-DevOps ivumela amabhizinisi ukuthi athole izinzuzo eziningi. Kusuka ekugxilwe kakhulu okuthuthukile kwikhwalithi yomkhiqizo kuya ekhonweni loku…
Ingabe Ingane Yakho Igula Njalo? Izizathu Ezi-4 Ekhaya Lakho Kungaba Isisulu
by U-Anica Oaks
Ukugula kuyinto ejwayelekile. Iningi labantu liyabhekana nalo ngezikhathi ezithile, kepha kwesinye isikhathi ukugula kungakhula ngokweqile. Labo abaqaphela ukuthi ingane yabo iyagula kaningi bangafuna ukubona ukuthi ngabe kubangelwa yini yindlu yabo. Impela, hlola…
Ungasakha Kanjani Isithuthuthu Sakho Esivela Phambilini?
by U-Ian P.
Ukwakha izindlela zakho zokuhamba bekuyinto ethokozisa abaningi inkawu yamafutha selokhu injini yomlilo yangaphakathi yaqala ukwaziswa umphakathi obanzi. Lapho abantu sebethole ukuthi kusebenza kanjani konke, bekungekho ukuvimba ukuhlaselwa kwe…
Ingabe Imijikelezo Yasekuseni Ikhulisiwe?
by UJohnny E
Imikhuba yasekuseni isebenza kubantu abaningi ngoba iyabasiza ukuthi baqale izinsuku zabo futhi baqale ngenothi elihle futhi elikhiqizayo. Kodwa-ke, imikhuba yasekuseni (ikakhulukazi enamandla) akuyona eyabo bonke abantu. Empeleni, imikhuba yasekuseni ibekwa ngokweqile ngezizathu eziningi ezahlukene… Akuwona wonke umuntu…
Imiphumela Ebalulekile Yokuqedwa Kwenkampani Yobambiswano
by UDominic L
Imiphumela ebucayi yokuhlakazeka kwenkampani yenhlangano injengalokhu: Ukuqhubeka nobungozi bokuphelezelwa ngemuva kokuhlakazwa (Isigaba 45): Naphezu kokuhlakazeka kwenkampani, abahambisana nabo bahlala besengozini ngokufanele kubantu bangaphandle nganoma yimuphi umsebenzi owenziwe yinoma ngubani wabo…
Ukunakekela Abathandekayo: Amathiphu Okusiza Ngokunakekelwa Kwasekhaya
Uma ungomunye wabantu baseMelika abalinganiselwa ezigidini ezingama-65.7 abahlinzeka ngokunakekela ilungu lomndeni ekhaya lakho, uyazi ukuthi kungokuhlangenwe nakho okuthokozisa ngendlela emangalisayo okuvame ukuza nezinselelo zayo ezihlukile. Ungasebenzisa lawa macebiso ukusiza ukunakekela…
Ukugwema Amaphutha Ejwayelekile Ebhizinisi, Amanga Nezicupho
Ukuqhuba ibhizinisi kusho ukuthatha izinqumo. Ukwenza izinqumo ezinhle kusho imiphumela emihle yebhizinisi lakho, kodwa ngeshwa kunezinhlobo zezinto ezimile phakathi kwakho nalezo zinqumo ezinhle okudingeka uzenze. Ngaphandle kokungabi nalo ulwazi oludingayo…
I-Business 101 - Sure-fire Ways To Make Your First Trade Show A Big Hit
Imibukiso yezohwebo idlala indima ebalulekile ekuqhakambiseni ibhizinisi futhi uma kukhulunywa ngombukiso wokuqala wokuhweba, kubaluleke kakhulu ukuwenza uphumelele. Lokho kungenxa yokuthi uzobhekana nezimbangi zakho futhi uphenye imakethe eduze.…
Amathiphu Wokufaka Izingane Zakho Ekhishini
Sithumela izingane zethu esikoleni ukuze zifunde izifundo ezahlukahlukene futhi zigcine zikhetha indlela efanele yokusebenza. Kepha, kuthiwani ngemfundo yangempela yomhlaba, ezobasiza ukuthi baphile kulo mhlaba? Hhayi-ke, leyo yinto zonke izingane ezikufundayo kuye…